TRAFIKANA HAREM-PIRENENA : Nahatratra 1036 ireo sokatra saika haondrana an-tsokosoko
Nanao tohy vakana ny fahatratraran’ny mpiasan’ny fadin-tseranana ireo olona mikasa hanondrana harem-pirenena antsokosoko. 10 août 2017
Raha teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato manokana dia zana-tsokatra miisa 1036 no tra-tehaka tamina teratany vahiny izay nokasaina ho entina hivoaka an’i Madagasikara izay tsy nahazoana alalana akory.
Nanambara ireo mpiasan’ny fadin-tseranana fa mitohy hatrany ny ezaka hataon’izy ireo amin’ny fanatratrarana ireo mpanondrana harem-pirenena tsy ara-dalana. Manome toky ihany koa amin’ny fampiasana ireo fitaovana vaovao izay isany manampy betsaka sy manamora ny fahatratrarana ireo entana. Tamin’ity taona ity, nanomboka ny volana janoary no nakaty dia trangana fanondranana sokatra an-tsokosoko miisa valo no sarona teny Ivato izay nahatratrarana zana-tsokatra miisa hatrany amin’ny 1036.
Ireo karazany Radiata izay tena arovana fatratra sy efa mihalany tamingana any amin’ireo valan-javaboahary arovana no tena maro an’isa amin’ireo tratra ireto. Tranga vao niseho ny faran’ny herinandro lasa teo izao no nahatratrarana roalahy teratany vahiny nikasa hitondra sokatra miisa 59 ho any Inde. Nikasa handray sidina “Air Austral” izy ireo no tazan’ny “scanner” teny Ivato ny fisian’ireo zana-tsokatra marobe tao anaty valizy noentiny.
Tsy nahazo nanohy ny diany intsony izy ireo ary nalefa avy hatrany halaina am-bavany eny amin’ny minisiteran’ny tontolo iainana. Fantatra fa aorian’ny fahatratrarana zana-tsokatra tahaka izao dia tsy maintsy mandalo fitiliana sy fizaham-pahasalamana aloha ireo sokatra vao afaka averina any amin’ny valan-javaboahary natoraly misy azy. Sazy roa ka hatramin’ny folo taona miampy lamandy no azon’izay tratra manao ity asa maloto ity. Hatreto olona miisa telo no fantatra fa efa naiditra am-ponja noho ny raharaha fanondranana sokatra an-tsokosoko.